Semalt waxay ogtahay sida loo xakameyn karo Google Spam Referral Referral
E-commerce wuxuu noqonayaa meel caadi ah ganacsiyada. Bloggers iyo milkiileyaasha kale ee websiteka waxay u baahan yihiin baahi weyn oo loogu talagalay suuq-geynta dijital ah ee boggooda internetka. Xaaladaha intooda badan, mulkiilayaasha websaydhka iyo milkiilayaasha bogga waxay isticmaalaan xirfadaha suuq geynta sida suuq-geynta suuq-geynta iyo sidoo kale Raadinta Mashiinka Raadinta si loo hubiyo in boggooda internetka ay u habboon yihiin arjiyada kala duwan ee internetka. Nidaamyada suuq-geynta intooda badan waxay ku xiran yihiin xoogga mashiinka raadinta xirfadaha suuq-geynta si loo hubiyo in boggooda ay ku fiicnaadaan matoorada raadinta - domain satan firmalar. Waxaa jira siyaabo badan oo sameynta suuq-geynta internetka ay saameyn ku yeelan karto ganacsiga internetka. Tusaale ahaan, shirkado badan ayaa fulin kara tiro badan oo ah suuq-geynta shabakadda ee waxqabadyada SEO-ga.
Google Analytics waxaa ku jiri kara spam xun. Qalabkani wuxuu caadi u yahay qof kasta oo webmaster ah si uu u helo aqoonta iyo qaababka loo sameynayo isbedelada lagama maarmaanka u ah habka uu u socdo oo dhan. Xaalado badan, dadku waxay la dhibaatoodaan saameynta Google Spam u gudbinta spam. Spamkan waxaa laga yaabaa inuu ku lug yeesho fariimo isdaba-joog ah oo ka imanaya domain aan la garanayn. Kiisaska intooda badan, weerarrada xayeysiinta ee Google Analytics ee soo noqnoqda waxay ka yimaadaan xuduudaha liiska madow..Waa muhiim inaad ku sii socotid qorshe taas oo ugu dambeyntii ah meel ku haboon oo lagu fulin karo. Shirkadaha tira badan ayaa ku fashilmay qorshooyinka suuqgeynta marka ay iska indho-tiraan suurtagalka weerarkan spam.
Andrew Dyhan, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semt Adeegga Dijital, wuxuu halkan ku qeexayaa arrimo wax ku ool ah si aad u guulaysato.
Boot iyo kabo
Waxaa jira dilal fara badan oo lagu fulinayo hawlo wanaagsan. Goobahaasi waxay isku dayaan inay ku daydaan robots jirka ah ee adduunka software. Tusaale ahaan, xirmooyinka Google waxay leeyihiin meelo badan oo ay ku gaaraan goobaha kalsoonida leh iyo sidoo kale kuwa aan awood u lahayn in ay u oggolaadaan hawlaha si wanaagsan. Weeraro isdaba-joog ah oo loo adeegsado Google Analytics oo kufsi ah ayaa ku tiirsan khadadka hackerka. Botnets waxay ku lug leeyihiin taxane badan oo gaar ah oo bartilmaameed u ah aagga caadiga ah. Weerarrada Botnet waxay sameeyaan dhammaan websaydhka daba-galka oo dhib badan. Waxay ku sameeyn karaan Diidmada Adeegga Diidmada adeegga ee server-yada oo u nugul weerarka jireed. Dadka sameeya boggaga internetka e-commerce waxay sidoo kale ka faa'iideysan karaan isticmaalka bots. Tusaale ahaan, matoorada raadinta waxay isticmaalaan qoraalladan weyn si ay u raadsadaan boggaga internetka. Qodobadan, spam u gudbinta waxay ka imaan kartaa qaar ka mid ah gowska xun.
Inta badan bogagga shabakadda e-commerce waxay ku xiran yihiin bots si ay goobahooda u fiican. Siyaabahaan, waxay ka helaan suuqyada ka jira internetka. Tusaale ahaan, ganacsiyada sida shirkadaha ganacsiga e-macaamiisha ayaa ka iibsan kara iibsiyo badan oo ka imanaya macaamiisha kuwaas oo ka yimid dhammaan websaydhka. Waxyeelada Google Analytics Wareegtada ah ayaa ka imaan karta bots iyo in ay sameyso websayd u ​​qabato dhaawacyo badan oo websaydh. Isticmaalayaasha Internetka waa in ay ka warqabaan weerarrada google ee weerarka iyo sidoo kale weeraro kale oo badan oo websaydh ah. Sidan oo kale, shabakadaha waxay noqdaan kuwa u nugul kharibayaasha kuwaas oo bartilmaameedsanaya macluumaadka macaamiisha ama xogta isticmaalaha sida xogta kaararka deynta. Tilmaamahan SEO wuxuu kaa caawin karaa dadaalkaaga inaad ka fogaato spam gudbinta Google Analytics. Waxaad samayn kartaa website-ka kaas oo kaamil ah dhammaan noocyada hanjabaadaha weerarka webka. Dhaqdhaqaaqa naqshadeynta websaydh kasta, marwalba xusuusnow si aad u hubiso inaad haysato nidaam ammaan oo lagu kalsoon yahay SEO-ga.